Musharaxiin faro badan oo Kronofogden ku jira - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Pontus Skagersten/Sveriges Radio
Musharaxiin faro badan oo Kronofogden ku jira
La daabacay torsdag 4 september 2014 kl 13.09
1 420 oo ka mid ah musharaxiinta ku qoran waraaqaha codbaxinta doorashada dayrtan dalka ka dhaceysa ayaa ka diiwaangashan heyadda qaan aruurinta ee Kronofogden, kuwaas oo iskugeyn lagu leeyahay lacag gaareysa 233 milyan oo karoon, sida ay muujineyso dabogal arrinkan uu ku sameeyey telefishinka SVT.
SVT aya u kuurgalay 53 000 oo ah musharaxiinta u taagaan doorashada dayrtan dhacaysa. Musharaxiinta tv:ga u kuurgalay ayaa ah kuwo ay xisbiyadooda mandat ku leeyahiin golayaasha degmooyinka, gobolada, barlaamaanka dalka, iyo weliba barlamaanka EU.
Xisbiga musharaxiinta ugu badani deyntooda ka diiwaan gashan tahay Kronofogden ayaa ah xisbiga Vänsterpartiet, halka xisbiga Moderatka yahay xisbiga ugu yar musharaxiinta lagu leeyahay deymayha Koronfogden loo gudbiyey.
Marka ruuxa bixin waayo qaanta ayaa loo gudbiyaa heyadda Kronofogden oo qaanta qasab uga qaada.